The Ants | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (အဖွဲ့) / The Ants
Category Archives: The Ants
ထာဝစဉ် 2005 Rock And Rap Live Show (1)
၁. စိုင်းစိုင်း, နန္ဒစိုင်း – အိုကမ္ဘာမြေ ၂. ရွှေထိုက် – တစ်လိမ်နှစ်လိမ် ၃. ရဲလေး – ထိပ်ဆုံးမှာအမေ ၄. နှင်းဆီနက် – မေမေဆူလိမ့်မယ် ၅. ကျော်သူစိုး – တိုးတိုးပြောပါ ၆. Big Bag – ကြားနေကြအသံများ ၇. စောညီညီ, မိုးမိုး – Sayonara ၈. The Ants – ငပျင်း ၉. J-Me – ဒါမင်းဘဝ ၁၀. Bambino – ဇာတ်လမ်း ၁၁. Tuna – Telephone ချစ်သူ
May 30, 2009 Mad Computerist အဆိုတော် (အဖွဲ့) အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) စိုင်းစိုင်း ရဲလေး နန္ဒစိုင်း စောညီညီ ရွှေထိုက် ကျော်သူစိုး မိုးမိုး Bambino Big Bag J-Me Myanmar Artist The Ants Tuna4Comments
Eazy FM – Live Show 2
၀၁။ ဘာလိုလဲပြော – D Beez ၀၂။ အလွတ်သာပြော – J Me + K Cash ၀၃။ မိုးရေစက်များ – ဖြူဖြူကျော်သိန်း ၀၄။ သိသင့်ပြီ – No ၀၅။ အမေ – Fire Cracker ၀၆။ လှည့်စားတဲ့အတိတ် – Cobra ၀၇။ မျက်နှာသစ် – The Ants ၀၈။ ဖုန်းနားကအဖြစ် – ဟိန်းဇော် + စင်ဒီ ၀၉။ ဝေးသွားလဲ – Target ၁၀။ ဒို့ကအေးအေးဆေးဆေး – ယုဇန
December 29, 2008 ME *MMA* အဆိုတော် (အဖွဲ့) အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) စင်ဒီ ဖြူဖြူကျော်သိန်း ယုဇန ဟိန်းမြတ် D.Beez FireCracker K-cash Myanmar Artist Target The Ants 1 Comment
The Ants – ရောင်စုံချောကလက်
၁။ ဦးဘညွန့် ၂။ မိုင်များနဲ့ ခြားနားခြင်း ၃။ ငပျင်း ၄။ စတုတ္တအိမ်မက် ၅။ မစဉ်းစားခြင်းသီချင်းများ ၆။ မျက်နှာသေ ၇။ လမင်းလေး ၈။ ချာတိတ်တစ်ယောက်ကျဆုံးချိန် ၉။ လွဲမှားခြင်း ၁၀။ သုံည ၁၁။ ရိုစီ ၁၂။ အမှိုက်မရှုပ်နဲ့ ၁၃။ အန်ချင်တယ် ၁၄။ မိုးတိမ်အကြောင်း
February 22, 2008 mmsong အခွေ (တကိုယ်တော်) The Ants Leaveacomment
The Ants – ပထမ ဒုတိယ တတိယ
၁။ မိုးနတ်မင်းကြီးဆီသို့ ၂။ နောက်ထပ် ၃။ ပထမ ဒုတိယ တတိယ ၄။ နောက်ဆုံး ၅။ ရလဒ် ၆။ လူ့ဘ၀ ၇။ ဒီလိုလုပ်လိုက်ပါလား ၈။ သတိ ၉။ ဒီး ဒို ဒီး ၁၀။ အိမ်မက်ထဲ
February 21, 2008 mmsong အခွေ (တကိုယ်တော်) The Ants Leaveacomment
The Ants – နှံကောင်လေးရဲ့နွေဦးပုံပြင်
၁။ ဂီတအဉ္စလီ ၂။ နွေဦးပုံပြင် ၃။ ၁၀၉, ၁၁၀ ၄။ အိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်ရင်ကောင်းမယ် ၅။ သီချင်းဆိုင် ၆။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ၇။ နှံကောင်းလေးအတွက် ၈။ ထိမ်းချုပ်မရခြင်း ၉။ ငါတို့ပြောမယ့်ငါတို့အကြောင်း ၁၀။ မလွယ်တော့ဘူး ၁၁။ ပုရွက်ဆိတ်ရင်ကွဲ ၁၂။ ဂီတဉ္စလီ
February 20, 2008 mmsong အခွေ (တကိုယ်တော်) The Ants Leaveacomment
၁။ ပေးပါ – Monopoly ၂။ အချိန်လွန်ငှက် – NC -13 ၃။ ငါ့ဂီတ….ငါ့ဗီဇ – Wanted ၄။ အို…ညတွေ – Blaze ၅။ မပြန်ချင်တော့ – Monopoly ၆။ ခဏတာ – G latt ၇။ ခဲမလောက် – The Ants ၈။ ဘ၀ – ကိုင်ဇာတင်မုံ ၉။ နေရာမဲ့ – စည်သူ ၁၀။ ရုန်းထွက်မရ – သားပေါက် ၁၁။ ရုပ်သေး – Monopoly ၁၂။ တစ်စုံတစ်ရာ – Idiots ( Download this song … Continue Reading →
February 17, 2008 mmsong အခွေ (အများ) စည်သူ ဂျီလတ် ကိုင်ဇာတင်မုံ သားပေါက် Blaze Idiots Monopoly NC-13 The Ants Wanted9Comments
၁။ဘာလာလာ (Big Bag) ၂။တို့အတူ (Wanted) ၃။မင်းနဲ့ငါနဲ့ (The Ants) ၄။ကြိုးစားဆဲ(မင်းနဲ့နီးဖို့) (Blaze) ၅။ငါ့အပြစ်နဲ့ငါ (Idiots) Download this song only HERE ၆။မောဟစိတ်များ (အီတိုး) ၇။ဆူးမကြောက်ကြေး (Monopoly) ၈။ဝေးပြီးတဲ့နောက် (G Latt) ၉။ပြန်မဆုံဖြစ်ကြရင် (Vနိုထွန်း) ၁၀။အချိန်မလွန်ခင်မှာ (ကိုင်ဇာတင်မုံ) ၁၁။မှားနေ (NC-13) ၁၂။မျောက်ဖြစ်ချင်တယ် (ခန့်ဖြိုး)
February 9, 2008 mmsong အီတိုး အခွေ (အများ) ဂျီလတ် ကိုင်ဇာတင်မုံ ခန့်ဖြိုး Big Bag Blaze Idiots Monopoly NC-13 The Ants Vနိုထွန်း Wanted 16 Comments